Arujeria (Chirungu: Algeria; Chiarabhu: الجزائر (al-Jazā'ir), Chibhebha:ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ (Dzayer) kana sezvainozivikanwa Dhemokiratiki ripabhuriki yevanhu veArujeria inyika iri kuMaodzanyemba eAfurika, uye inyika yechiIziramu. Guta guru reArujeria rinonzi Aruja. Rujeria inyika iri chikamu cheMagirebhu (Maghreb). Kumaodzanyemba rakaganhwa nebhaharireMedhiteraniyani, uye kumaodzanyembaemabvazuva rakaganhwa neTunisia, kumabvazuva neRibhiya uye neNaija kuchamhembechemaodzanyemba. Kuchamhembechemadokero neMaari neMoriteniya, kumadokero kweSahara yakaganhwa neMoroko.
Mitauro yekuMatare: Chiarabbu, Berber
Guta Guru: Algiers
Nharaunda: 2381741 km²
Hugari hweVanhu: 40,400,000 (2016)
Tsinhano yeHugari: 15.9 km²
I TLD: .dz
Arujeria inyika hombe kwazvo muAfurika yese asi ruzhinji rwenyika yacho iGwenga reSahara.
Zita renyika rakatorwa kubva kuguta guru rakadaidzwa nezita rimwe chete rekuti "al-fill-ir" kana nyika nhasi ichienda kumutauro weChiarabhu.
3 Mamiro ekunze
4.1 Nhoroondo yekare
4.2 Kupinda kweMaarabhu
5 Matunhu eArujeria
6 MaGuta eArujeria
Zita renyika rinobva kuguta reArujyezi iro rinobva kuchiarabhu al-Jazāʾir (الجزائر, "zvitsuwa"), chimiro chakatemerwa chekare Jazāʾir Banī Mazghanna (جزائر بني مزغنة, "Zvitsuwa zveMadzinza eMazghanna"), rinoshandiswa nevadzidzi vemajogiraidhi vekare senge al-Idrisi.
El Kantara Biskra Arujeria
Huwandu hwenyika yeArujeria ruri mugwenga, iro gwenga resahara riri kudivi rechamhembe, saka 20% yemaodzanyemba enyika ndiyo nzvimbo ine mamisha ehuwandu hwenyika yacho. Idzo nzvimbo dzacho dziri padhuze neMedhiteriyani Kosti uye neMakomo eAtirasi. Iyo Atirasi yakakura kusvika mamita 2,308 pamusoro pemwero webhahari (MB; sea level).
Gwenga resahara rinotanga kuAtirasi uye richienda kuchamhembe kwerijoni reusw, robva rateera eriya rinejecha pasina kana zvinomera. Kuchamhembe chenzvimbo dziri kumusoro, dzine matombo chete.
Kudzikirira kuchamhembe kunemakomo akaita seTassili n'Aijier neAhaggar dzakareba mamita 2,918 richiita sezvitsuwa zvezvimera mugwenga. Kune nzizi dziri kumaodzanyemba enzvimbo dziri kostaru. Mipata dzenzizi dzemukati dzakaoma, kunze kwekumashure kwekunge kwanaya, nzizi dzinesimba dzinooneka maawa anoteera.
Dhuni rejecha kuAhaggar Cultural Park crop
Nzvimbo irikuchamhembe ine mamiriro ekunze anoshandukwa neBhahari reMedhiteriyani. Hujoto pamwedzi waNyamavhuvhu unosvika ku25 ° C uye mumwedzi waNdira unosvika 12 ° C.
Mumakomo marefu kune chando chinotonhora uye kunogona kuwanikwa magodo emvura muzhizha raNdira asi kupisa kwacho kunokanyanya muna Chikunguru / Nyamavhuvhu.
Chamhemmbe cheAtirasi ndicho chinotanga mamiriro egwenga; hujoto hunogona kusvika pamusoro pe20 ° C muzuva rimwe. Muzhizha hujoto hwunodarika 40 ° C asi munguva yechando inodonha pasi pe ° C panguva dzeusiku.
Mvura inonaya yakanyanya kuderera: kunoita makore akateedzana pasina kana donhwe rimwe. Mumakomo eAhaggar mune puresipitesheni ishoma nekuda kwemhute, saka miti inenge yakati wandei nezvimwe zvinomera zviripo.
Kune nzvimbo 48 dzehutungamiriri dzinodaidzwa kuti matunhu, anowirirana zvakanyanya kumatunhu ari kune dzimwe nyika.
Vazhinji vagari vane musanganiswa weropa rweArabhu neTibheria uye mashoma eropa reTeki neTibheria; vangangoita vese (98%) vanotevera chitendero cheIziramu.
MaKristu vanotora huwandu 1%, kusanganisira maPurotesitendi nemaKaturike, asi vamwe vanokundikana kubuda nekuda kwekutya kutambudzwa.
Mitauro yepamutemo ndeyeChiarabhu (72%) uye Chihebheru (27-30%), asi vazhinji vacho vanotaurawo Chifurenji.
↑ "Démographie (ONS)". ONS. 19 January 2016. Archived from the original on 6 March 2012. Retrieved 19 January 2014.
↑ L.Carl Brown, (8 Chikunguru 2021), 'Arujeria' Yakatariswa: 12 Chikunguru 2021
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Algeria&oldid=90143"
Last edited on 19 Mbudzi 2021, at 19:06
This page was last edited on 19 Mbudzi 2021, at 19:06.